China UV Flatbed Wood Printer Machine yekutengesa YC2513L vagadziri uye vanotengesa | Ntek
• ChiJapan chakatorwa kunze kweRicoh Gen5 / Ricoh Gen6 musoro wekugadzirwa kwemaindasitiri
• CMYK W LC LM uye varnish inosarudzika kune yakajeka nzvimbo uye yepamusoro mhando kudhinda
Kugamuchira maviri-chikamu chakanyatsoita sikuruu tsvimbo pamativi ese eY axis synchronous kumhanya
• Auto kukwirira kuona tekinoroji kuti uone kudhinda midhiya ukobvu otomatiki
Otomatiki anti-static dhizaini yekudzivirira guruva inki inodonhedza ichibhururuka sarudzo
• Yepamberi yekudhinda yemusoro inorwisa-kupunzika sisitimu yekudzivirira njodzi yekurovera pakati pechinyorwa cheprinta nezvinhu
NTEK YC2513L imhando yeiyo hi-chaiyo UV flatbed printer yakanyanya kugadzirirwa yemunhu kugadzirisa mabhizinesi kuti asangane nekurongeka kwavo kwepamusoro uye nezvinodiwa zvemunhu. Ichi chigadzirwa ndicho chinodhura-chinodhindisa, kungave kuri kudhinda diki fomati kana hombe fomati inogona kugutsikana, kudhinda kumhanya, kukwirira kwakaringana, hupenyu hurefu, varnish, emboss mhedzisiro inogona kugutsikana.
Yakashongedzerwa naRicoh GEN5 / Ricoh GEN6 / TOSHIBA CE4M anodhinda musoro, iyo YC2513L UV purinda inogona kudhinda mu hi-kumhanya pamwe neku hi-kunyatsoita mu 8 mavara 1200 * 1200 DPI. YC2513L iri yemakwikwi digitaalinen UV flatbed purinda uchishandisa yepakutanga kupinza Panasonic servo system, izvo zvinoita kuti ishande stable uye uine hupenyu hwakareba nguva inopfuura makore gumi, Muchina uyu une CMYK WV LC LM sarudzo, inoshanduka yekudonha kugona kugona, ichigadzira chaiyo uye yakasimba kudhinda kwe UV.
Inogona kupurinda chero zvakatsetseka zvinhu izvo ukobvu zviri pasi pe100mm, zvakakwirira zvinogona kugadzirwa. NTEK YC2513LUV flatbed purinda adopt yemhando yepamusoro kutenderera kwemvura mwenje kuporesa chishandiso, kuitira kuti iyo yekudhinda zvinhu irege kukanganiswa netembiricha, kuti ive nechokwadi chekudhinda mhando. UV flatbed printer yakanyanya kushandiswa mukati memukati uye outmusuo zvinhu, zvakadai sehuni / zvedongo / simbi / acrylic /WDC/PVC/ girazi / Wallpaper / yeruzhinji kadhi rekuratidzira zvichingodaro.
NTEK YC2513L UV flatbed purinda ine yakakwira kumisikidzwa, neese simbi furemu chimiro inoita purinda ine kugadzikana kwakakwana. Yakaomeswa anodized yekutsiva chikuva iyo inogona kudzivirira kukwenya neyakaomarara zvinhu, zvitanhatu nzvimbo nzvimbo yekutsvaira chikuva chekuita nyore kushanda uye chengetedza simba. Kunyoresa pini inosarudzika kune chaiyo yekumisikidza zvinhu kukurerutsa basa. Otomatiki kukwirira kuyerwa, purinda inongoerekana ichiyera kureba pakati peprinta uye midhiya kuitira nyore kushanda. Dhinda remusoro wekutakura anti-kudhumhana system iyo painobata chimwe chinhu, inomirazvinonhuwirira kuchengetedza iyo yekudhinda. Otomatiki anti-static, inoderedza inki pamusoro pekupfira inokonzerwa neiyo static, inatsiridza iyo yekudhinda mhando. Kaviri isina kunaka kumanikidza sisitimu, inoona kuti printer inodhinda inki mushe mushe mukugadzira uye kunyangwe mune yekumhanyisa yekudhinda modhi.
Zvadaro: Yekumhanyisa multicolor multifunction maindasitiri inkjet ceramic ndiro yekudhinda muchina
Wood Printer Muchina